Ny orinasanay dia tsy miraharaha fotsiny ny ezaka ataon'ireo mpiasa fa ny fahasalaman'ny mpiasa sy ny fahasalaman'ny mpiasa ihany koa. Ohatra, hikarakara fihaonana ara-panatanjahantena ny orinasanay mba ahafahan'ny mpiasa miasa. Tamin'ny herintaona, ny mpandray anjara rehetra dia mandray anjara amin'ny fihaonana ara-panatanjahantena. Nandritra ny fihaonana ara-panatanjahantena dia nametraka mavesatra izahay ...
Fihaonamben'ny mpiasa amin'ny fikaonan'ny mpiasa amin'ny taona 2019
Ny Kaonferansa ho an'ny Kaompaniasana Lehibe tamin'ny taona 2019 2020/6/15, ny orinasantsika dia nanao ny Kaonferansa Commendation Staff tamin'ny taona 2019. Nandritra ny fihaonambe voalohany, ny tompon'andraikitra Mr.Xie dia namintina ny zava-bita tamin'ny taon-dasa. Mitombo ny isan'ny varotra milina slitting ...
Arahabaina ny tranokala vaovao Hangzhou Hongli Machinery Co, Ltd tamin'ny fomba ofisialy!
Niorina tamin'ny volana aogositra 2002 ny orinasa ary manana mpiasa maherin'ny 70 sy foibe teknika amin'izao fotoana izao izy ireo. Ny orinasa dia hita ao amin'ny Linpu Town Industrial Park, Xiaoshan, City Hangzhou, Faritanin'i Zhejiang, iray kilometatra miala ny trano fandroahana Linpu amin'ny làlan'i Hangjinqu ...